ကမ္ဘာ့ဖလားသာသနာပွုဆရာ Reinhard Bonnke ရဲ့သေခြင်း | Apg29
ကမ္ဘာ့ဖလားသာသနာပွုဆရာ Reinhard Bonnke ရဲ့သေခြင်း
လူအတော်များများသည်သူ၏တရားဟောချက်ပြီးနောက်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရ၏ခဲ့ကြသည်, ပြီးတော့သူနေမကောင်းဘို့ဆုတောင်းလေ၏။ ထို့နောက်သူကသူမ၏နဖူးပေါ်ပေါ့ပေါ့မိမိလက်ကိုတင်ပြီးတော့သူမ၏ခရီးသွားလာခြင်း, တွန်းလှည်းပြန်မိန်းမအားကြွလာ, သူလမ်းလျှောက်လာတယ်။
Reinhard Bonnke ခရစ်ယာန်တစ်ဦးသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်ဧဝံဂေလိဆရာနှင့်တရားဟောဆရာဖြစ်ခဲ့သည်။ သူက 1970 ၌သူ၏ဧဝံဂေလိအလုပ်စတင်ခဲ့ပြီးကြီးတဲ၌အစည်းအဝေးများရှိခဲ့ပါတယ်။ အစည်းအဝေးတွေပိုကြီးတယ်သည့်အခါနောက်ပိုင်းတွင်သူကြီးလယ်ပြင်ပေါ်ထွက်သို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ နိုင်ဂျီးရီးယားရှိသူ၏အစည်းအဝေးများသန်းပေါင်းများစွာသွားရောက်ခဲ့သည်။
Reinhard Bonnke 79 နှစ်ပဲရှိသေးတယ်။ အထက်ပုံမှာ 2014 ကနေဖြစ်ပါတယ်ဝီကီပီးဒီးယားကနေယူထားပါသည်။
ငါအကြိမ်အနည်းငယ်ကဟောပြောခြင်း Reinhard Bonnke စကားကိုသင်တို့ကြားရပြီအမြဲတမ်းလူတွေကိုကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရ၏တယ်။ ဒါဟာအထိယုံကြည်နေသည် 75 သန်း သညျယရှေုခရစျသလက်ခံရရှိနှင့်သူ၏ဧဝံဂေလိဝန်ဆောင်မှုအားဖြင့်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရ၏ခဲ့သည်!
ကိုယ်တော်မြတ်ကမ္ဘာအနှံ့ကြီးစွာသောပြန်လည်စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေး၌ဟောပြောခြင်း, တစ်ဦးဧဝံဂေလိဆရာအဖြစ် 60 နှစ်ကြာအလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အကြိမ်ပေါင်းများစွာလည်း Bonke ဆွီဒင်သွားရောက်ခဲ့သည်။ ဒါ့အပြင်ဤနေရာတွင်မိမိ၏ဓမ်မအမှုအားဖြင့်ကယ်ဆယ်လူတွေရှိကြ၏။
ငါJönköping Pentecostal အသင်းတော်၌သမ္မာကျမ်းစာကျောင်းပင်တေကုတ္တေရန်သွားသောအခါလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာကျနော်တို့အရှေ့ဥရောပတစ်လူတန်းစားခရီးစဉ်အပေါ်သွားဘဲ, တမြို့လုံးတစ်ခရီးတစ်ထောက်နားကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘတ်စ်ကားခရီးစဉ် Hannover ခေတ်ပြိုင်အနောက်ဂျာမဏီနှင့်တစ်ဦးမဲဆွယ်စည်းရုံးရေးချီတက်ပွဲအတွက် Reinhard Bonnke မှနားထောင်ခဲ့တယ်။
လူအတော်များများသည်သူ၏တရားဟောချက်ပြီးနောက်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရ၏ခဲ့ကြသည်, ပြီးတော့သူနေမကောင်းဘို့ဆုတောင်းလေ၏။ ထိုအခါငါတစ်ဘီးတပ်ကုလားထိုင်များတွင်ထိုင်လျက်အမျိုးသမီးတစ်ဦးသတိပြုမိသည်။ သူကဘီးတပ်ကုလားထိုင်များတွင်ပင်ထိုမိန်းမသည်ဒါရောက်ရှိလာခဲ့ဖူးတဲ့သူတွေကိုအပေါ်သူ၏လက်ကိုတင်, ပြီးတော့သူကအပေါ်သွား၏။ ငါဘာမှမဖြစ်ပျက်ခဲ့လျှင်ကြည့်ရှုရန်အလွန်ဂရုတစိုက်ကြည့်လိုက်သည်။ သို့သော်ဘာမျှမဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။
ထို့နောက်သူကသူမ၏နဖူးပေါ်ပေါ့ပေါ့မိမိလက်ကိုတင်ပြီးတော့သူမ၏ခရီးသွားလာခြင်း, တွန်းလှည်းပြန်မိန်းမအားကြွလာ, သူလမ်းလျှောက်လာတယ်။ ကျနော်တို့ခရီးစဉ်အပေါ်ခဲ့ကြသည်ရှင်းလင်းစွာအံ့အားခဲ့ကြသည်နှင့်အကြှနျုပျတို့မကျြစိမယုံကြည်နိုင်ဘူး။ သူ့ကိုငါမှားခဲ့တာဘယ်အရာကိုမသိရပါဘူး, ဒါပေမယ့်ငါသူမထသွားလေ၏ငါတို့သိကြ၏။
ဆှီဒငျ Pentecostal ခေါင်းဆောင် twitter ပေါ်မှာရေးသားဒံယလေသ Alm :
"Reinhard Bonnke ခရစ်တော်ကြောင့်သန်းပေါင်းများစွာအနိုင်ရရှိခဲ့သည်။ ငါသိပ်သူ့ကိုတန်ဖိုးထား။ သူကဂန္တ Pentecostal တရားဟောဆရာဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ဟယ်လ်စင်ကီ။ ငြိမ်ဝပ်စွာ နေ. မစ္စတာအတွက်ဘာလင်, ဆွီဒင်နှင့် 2018 အဖြစ်နှောင်းပိုင်းတွင်အဖြစ်သူ့ကိုစကားကိုနားထောငျသောအခါငါသတိရ" ich bin ကိုသာသနာပွုဆရာ! " ။
ကောင်းစွာသည်သူ၏ဧဝံဂေလိဆရာလုပ်ရပ်ဖျော်ဖြေပြီးနောက်ယေရှု၏ယနေ့ဧဝံဂေလိဆရာ Reinhard Bonnke အိမ်မှာ!